I-Horoscope ngo-2010 ibe ngumqondiso weekali zezodiac
Sinikela kwingqalelo yakho kwi-horoscope ngo-2010 ngokubonakalisa izikali ze-zodiac. I-Mascot yenyanga malunga nezisindo: i-tourmaline. Iintsuku ezikhethiweyo zezikali: 25, Septemba 29, 8, 12, 22 Oktobha. Iintsuku ezinzima zezikali: Septemba 27, 4, 10, ngo-Oktobha 17. Okuphambili kwezinto ezinomdla: ukuziqonda, ukukhula komntu, izicwangciso zokudala.
Ukususela ngoSeptemba 23 ukuya ku-Oktobha 2. Le nyanga, uya kuzihlawula ngokwakho ngaphezu komlingane, kwaye oku, ngokwemvelo, kunokudala ubunzima abathile kulwalamano. Ixesha elinzima kakhulu ukususela ngoSeptemba 26 de kube sekupheleni kweminyaka elishumi, xa kuza kubonakala ngathi izicwangciso zakho kulwalamano ziqhutyelwa ngokuthe ngcembe kwaye zingagqibekanga. Ngomhla ka-Sept. 24, kunokubakho ukungqubana komzwelo. NgoSeptemba 25, unokuzama ukuthetha intliziyo ngentliziyo ukunciphisa ukuphikisana okuye kwavela. Ukususela ngomhla we-3 ukuya ku-12 Oktobha. Ngaphambi ko-Oktobha 5, kusenokuba nobunzima, kwaye emva kolu suku iingxabano ziya kuqala ukuba buthathaka. Usuku olunzima emoyeni - ngo-Oktobha 7, zama ukuyeka kude namazwi angenangqondo, ungakhubeki ngeze, isizathu asikho kuwe, kungekhona kumlingane. Ubomi obusondeleyo kule mihla ayithathi hlangothi. Ukususela ngomhla we-13 ukuya ku-23 Oktobha. Ngowe-Oktobha 16, uya kukwazi ukugqiba zonke iingxabano zakho zangaphakathi, fumana inkxaso kuwe, kwaye lo ngumhla ongcono kakhulu kwintlanganiso yothando - uyisebenzise. Usuku olulandelayo alukho mbi, kodwa i-short spate time spat kwizinto eziphathekayo ayikhangeli. Oktobha 21 azikhokeli iingxoxo ezinzulu malunga nokuhlala kunye, amalungelo kunye neemfanelo - thumela ingxoxo engathandekiyo ubuncinane ngosuku olulandelayo. Oktobha 23 ngumhla ogqibeleleyo kwintlanganiso yesithandane kunye nobudlelwane obusondeleyo. Umhla wobuRoma. Nika isinyathelo kwizandla zekhethiweyo wakho - cela ukuba ahlele isimangalo kuwe. Izicwangciso zingcono ukuba zingakhi, makube nokuhlaziywa okuqhubekayo.
Ngoku kubalulekile ukugqiba yonke imicimbi yekhaya ngexesha, kwaye ungayishiyi ixesha elizayo. NgoSeptemba 24, ukuphikisana komtshato kunokugqithisa, kungcono ukuba ungacwangcisi kule mihla imicimbi ebalulekileyo okanye ingxoxo ebalulekileyo. Ngexesha ukususela ngoSeptemba 25 ukuya ku-Oktobha 5, imisebenzi yendlu iza kuba nenxalenye ebalulekileyo yobomi bakho. Mhlawumbi, kubalulekile ukwenza izigqibo ezibalulekileyo malunga nendlu kunye nosapho, ukuxazulula iingxaki eziphuthumayo. Oktobha 14 - usuku oluneengxaki, alukho imfuneko yokuba nencoko ebalulekileyo nabazali. Isimo se-15 siya kuba lula - cwangcisa ikhefu leentsapho ezidibeneyo. Oktobha 16 no-17 banakekele abantwana.
Imoya yempilo iya kufuna ukuba ingqalelo kunye nokunyamekela. Ngoko kha thalele. Yenza inqaku ekugqibeleni ukudibanisa, i-sauna okanye enye imithi ephumayo. Oku kuya kunceda kwaye kukuncedise ukulibala ngokukhathazeka kwakho kwimihla ngemihla kunye nemixhala. Kubalulekile ukuba ufunde ukugcina umgca kunye nokugcina iimvakalelo phantsi kolawulo, kungekhona ukuxhamla ngokukhawuleza kwentukuthelo, njengoko kunokubangela ukugqithisa kwezifo ezingapheliyo. Umkhiqizo wenyanga. Ijlasi ye-cranberry ijusi ekuseni iya kuba yindlela ekhuselekileyo yokukhusela imvula yokubanda.
I-Fortune ikukhathalela ngeendlela ezide, ngakumbi xa zenziwa ngenjongo yokwandisa imbono, ukuphakamisa izinga lokomoya, ukuqonda izithethe kunye nenkcubeko yamanye amazwe. Iintsuku ezilungileyo ukuqala olo hlobo-Septemba 28 no-29. NgoSeptemba 30, ngokuchaseneyo, akuyimfuneko ukuhamba. Emva ko-Oktobha 5, ishishini elinxulumene neeholide langaphandle liza kuqala. Ngo-Oktobha 5 no-6, kuyakunceda ukuba uchithe kwedwa, uqokelele amandla, kwaye ukhululeke kwaye ucamngce. Kwaye emva kwayo yonke inyanga iya kuphumelela. Oktobha 16 kunye ne-17 yithuba eligqibeleleyo lokuphuma, iziganeko zikarhulumente ziza kukuzisa kwaye ujabule. Indawo yamandla. Oktobha-inyanga yokuvulwa kwexesha lezemidlalo, nyamekela amathikithi okuhamba phambili kwi-premiere. Emva kokusebenza, uya kuziva uhlaziywe ngokwenene. Kwaye ukubonakala okutsha kuza kuvuselela yakho imisebenzi yokudala kunye nokuxhaphaza.
Le mpumelelo yemali yenyanga ikulindele, kwaye indima ebalulekileyo kule nto iya kudlala lakho iqabane okanye iqabane lamashishini. Iintsuku eziphumelele kakhulu, ukususela ngoSeptemba 30 ukuya ku-Oktobha 5, ngeli xesha unokwenza iibhenti ezinkulu, wenze izinto ezibalulekileyo. Emsebenzini kukho ubunzima obuhlukile, zama ukunyanga yonke into ngovuyo njengemidlalo yesikhashana. Ngoku ayilona xesha lihle kakhulu lokukhula kobugcisa, kodwa aluyi kuchaphazela imali ngeyiphi na indlela. Ngo-Oktobha 19, thintela ukugqithisa kwaye ungaphikisani nabalingane. Ukuthenga inyanga. Umshini wokuhlamba, umncedisi othembekileyo kwimisebenzi yasendlini.
Ukucinga ngenxa yoko, umnqweno wokuguqulela iingcamango zakho kwihlabathi lamaphupha zibe yinyaniso kunye nokuzimisela ukuwusebenzela - yonke into iya kuba yimpumelelo yempumelelo yakho kunye nemali. Ukongezelela, umsebenzi kunye nomsebenzi akusayi kunceda ukuqonda oko kwadalwa, kodwa nokuba yinto efanelekileyo yokukhusela izifo. Nangona kunjalo, emva kwe-Oktobha 14, kuya kuthatha inzame encinane yokuphumelela.
Ngoku okhethiweyo udinga ukunxibelelana kokomoya nawe - ixesha lokuba ube nomdla kwihlabathi lakhe langaphakathi. Yaye nangona kungabi lula kuye ukuba azibonakalise ngenxa yemingcipheko yangaphakathi kunye nokungabaza, nangona kunjalo ngokomoya angakudala i-reality story.
Nika ingqalelo kwimpilo yakhe - ixesha lokuba ulungelelanise ulawulo lomhla, ukutya okunomsoco, ngokukhawuleza ukujongana nokupheliswa kwemikhwa emibi. Amandla akhe aphelile, ngoko kuya kufuneka akhohlwe ngokugqithiseleka komsebenzi nakwezinye iindawo zobomi. Ukunyamekela isimo sakhe sengqondo.
Kwizinto eziphathekayo, yonke into iya kuba mnandi kuye. Impumelelo ingahamba kunye nokusebenza ngeebhanki zebhanki. Eli lixesha elona lihle kakhulu ukususela ngoSeptemba 30 ukuya ku-Oktobha 4.
Inkqubo yomsebenzi iya kufuna kuye ukunyamezela, ukunyamezela kunye nokukwazi ukuqhuba ulwalamano olunzima kunye nabaphathi kunye nabo. Usuku oluxanduva - Oktobha 19, akukufanelekanga ukuqala iiprojekthi zehlabathi, kwaye kungcono ukudlulisela amacala alula. Ixesha eliqhelekileyo liyakwazi ukugqithisa, isisombululo kuphela ukulinda.
Kubudlelwane nabahlobo konke kuxhomekeke ngokupheleleyo kuye - kwiminqweno yakhe, izicwangciso kunye neenjongo. Kungenzeka ukuba ukuthetha nomhlobo omnye okanye ababini banokukunceda ukufumanisa isicwangciso sokuphuhlisa phambili.
Kuya kuba kuhle ukuba ahambe uhambo olude. Unokuqala uhambo ngoSeptemba 28-29. Zama ukucinga ngeprogram kwangaphambili - khetha ilizwe, uthenge iincwadi zesikhokelo, uqhelane nezinto ezisisiseko zenkcubeko nenkolo, funda ngamasiko asekuhlaleni.
Ukuhambelana kwabantu kwiimpawu ze-zodiac
Iimpawu zesibonakaliso se-zodiac yeebhunga
Ziziphi iitato ezizisa inhlanhla kunye nolonwabo?
Ngaphandle kwePanama akukho ndawo: sidibanise i-panama yehlobo kwintombazana ekhonjiweyo
Unyango lwefungus kwizikhonkwane zeenyawo
Phatha ukukhwehlela: zokupheka kwabantu
Indlela yokubuyisela iinwele emva kokunyuswa
Ukuhlaziywa kwangaphakathi kweScandinavia-umendo-2016
I-pizza kunye nama-mushroom e-porcini, i-parmesan ne-purple
Ingulube yeengulube kunye neententili
Iintsikelelo zeentlobo zeembambano
Ndiyakuhalalisela ekugqibeleni kokugqibela kubafundi abaphumelele kubafundi babo, ootitshala beklasi, utitshala wokuqala. Enyantywenkcoko ngokufowunelwa kokugqibela kwabafundi abaphumelele kwiiklasi ezili-9 ne-11
Imithetho ebalulekileyo ye-4 yokukhulula iintsuku: fumana indlela yokuphucula umzimba ngokuphepha!
Oko abantu bacinga ngamabele amabhinqa kunye nopapa
I-Salsa kunye nobhontshisi kunye neetchips
Ingxaki yobomi bentombi eRashiya
USergei Zhukov unqabile ukuhlinzwa ngoplastiki